Shopping ထွက်တက်တဲ့ မမ များ ညီမများ သတိထားရန် ~ Myanmar Express
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း က သူ့ အစ်မ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော့ကိုပြောပြတယ် ဘလောက်မှာတင်ပြီး အသိပေးပေးဖို့ ကိုလည်း ကျွန်တော့်ကိုတောင်းဆိုတယ်လေ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို……..တဲ့ ဒီနေ့ အိမ်ပြန်လာတော့ ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့မေးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်သူ့သူငယ်ချင်း ပလာဇာမှာ အင်္ကျီသွားဝယ်တုန်းက အဝတ်လဲခန်းမ အဝတ်လဲတဲ့ ပုံတွေအင်တာနက်မှာရော ဖုန်းတွေမှာပါ ရှိတယ်တဲ့။ အဲလို ပလာဇာမှာ မိန်းကလေးတွေအဝတ်လဲခန်းမှာ camera တွေ တပ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ခိုးရိုက် ပြီးတော့ forumတွေမှာတင် ယောကျာင်္းဆိုတဲ့ကောင်တွေက အဲလိုကိစ္စတွေဆို တခြားလူတွေပါမျှတတ်တဲ့အကျင့်ဖုန်းထဲမှာပုံတွေထည့် ဖုန်းအခြင်းခြင်း bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးပေးပုံတွေကို share လုပ်ကြ ပုံတွေကြည့်ပြီး ပုံထဲက တစ်ယောက်ကို အပြင်မှာမြင်တော့ ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်သွားကြတာ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ အခုတစ်ယောက်ကဆေးကျောင်းက ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့်သူအဝတ်လဲခန်းကလဲ နောက်မှာ အဖြူရောင်ကြီးကာထား ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ backgroundအဖြူကြီးနဲ့ပေါ့ မသိရင် မကောင်းတာ လုပ်စားနေတဲ့ မိန်းကလေး ဈေးခေါ်တာကျနေတာပဲ တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေမြန်မာအချင်းချင်းဗျာ အဲလို လူမဆန်တာတော့ မကောင်းဘူးဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တဲ့ကောင်တွေ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ညီမအဲ.. အဲလိုပြောရင် နာမှာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားတို့ ကောင်မလေး ခင်ဗျားတို့ မိန်းမခင်ဗျားတို့ သမီး အဲလို ရိုက်ခံပြီး သူများတွေကို ပုံတွေ မျှခံထိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ကောင်းတယ် အဲလို လူမဆန်ပဲကိုယ်ကျိုးအတွက် မလုပ်သင့်ဘူး နောက်ပြီး ဆိုင်ရှင်တွေ ခင်ဗျားတို့ကောဘာကြောင့် လူမဆန်တာလဲ ခင်ဗျားတို့ စီးပွားရေးလုပ်နေတာမဟုတ်လားဝယ်သူကိုလေးစားပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံရတယ် အဲလိုမျိုး cameraလာတတ်ထားတဲ့ ကောင်တွေက ခင်ဗျားတို့ကို ၁ပုံဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ ရှင်းပေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်း ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ မလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော် ထပ်ပြောမယ် ခင်ဗျားတို့ ကောင်မလေး ခင်ဗျားတို့ မိန်းမခင်ဗျားတို့ သမီးအဲလို ရိုက်ခံပြီး သူများတွေကို ပုံတွေ မျှခံထိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…?နောက်ပြီး လာဝယ်တဲ့လူတွေက မိကောင်းဖခင် သားသမီးတွေ…? အရင်ကဆို အဲလိုမျိုးပုံတွေနဲ့ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကို ငွေညှစ်၊ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သိတယ် မပြောချင်ဘူး ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူး။ နောက်ပြီးကျွန်တော့်မှာ သက်သေလည်းမရှိဘူး။ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ်ချင်းစာတရား မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လေး နည်းနည်းလောက်ထည့်ကြပါ အစ်မတွေ ညီမတွေ က လည်းအင်္ကျီဝယ်တဲ့အခါ သတိထားပါ အပေါ်ကနေပဲ ထပ်ဝတ်ကြပါ အဲလိုပဲ တခြား စကပ်တို့ဘောင်းဘီတို့ဝယ်လည်း သတိထားပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းပညာခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေ ရှိတယ်အစ်မကမေးတယ် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ် တရားစွဲပေါ့ တရားမစွဲခင် အမျိုးသမီးရေးရာကို တိုင်တရားစွဲဖို့ ဆိုင်မမှတ်မိရင် ပလာဇာကို တရားစွဲဗျာ တစ်ရှက်ကနေ နှစ်ရှက်ထက်တခြားလူတွေ အဲလိုမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ် အဲလိုပဲ ပြောလိုက်တယ် အစ်မလည်းပြန်ရောက်ကတည်းက ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်နဲ့ ထိုင်ဆဲနေတာ ဆဲလို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဒါကြောင့် ငါလည်း ဒီစာလေးကို နိူင်ငံခြားမှာ BLOG တစ်ခုကို ရင်ထဲကကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တွေ အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းရေးသားနိူင်ခွင့်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမင်းဆီကိုပဲရေးပို့ လိုက်တယ်ကွာ မင်း BLOGမှာလည်း ဒီအကြောင်းရာတွေ ဖော်ပြပေး စေချင်တယ် သူငယ်ချင်းရေ။ဒီ POST ကို COPY လုပ်၍ FWRD MAIL ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ ရဲ့ BLOG များတွင်ကူးယူ တင်ပြ၍ ဖြစ်စေ၊သင့်၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများကို အသိပေးနှိုးဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ မှူ့ ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိန်းကလေးများရဲ့ ချစ်မြတ်နိူးစရာ စရိုက်လေးတွေနဲ့့ကမ္ဘာပေါ်မှာပြိုင်စံရှား အရမ်းကိုအရှက်အကြောက် ကြီးမားတတ်ကြတဲ့ မြန်မာ့အမျိုးကောင်း သမီး ရတနာလေးများရဲ့အရှက်နဲ့ သိက္ခာတို့ ကို လူမဆန်စွာ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းနေကြပြီးကိုယ်ချင်းစာတရား နဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကင်းမဲ့နေကြတဲ့ သူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှ မိမိတို့တတ်အားသ၍ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် ပေးစေလိုပါကြောင်း ကျွန်တော် ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကို တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ။ အစ်မတွေ ညီမတွေ အားလုံးကလည်း ကိုယ့်အန္တာရာယ်ကိုကိုယ် ဂရုတစိုက်နဲ့သတိထားရင်း ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါလို့ကျွန်တော် ထပ်ပြီး သတိပေးလိုက်ပါတယ် Myanmar Express
ပလာဇာတွေ၊ ရှော့ပင်းမောတွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေရဲ့ အ၀တ်လဲခန်း တွေကို လျှပ်တစ်ပြက်ဝင်စစ် သင့်နေပြီ ထင်တယ်။ ဒါမျိုးတွေ့ရင် ဆိုင်ပါသိမ်းပစ်ပါ။
9 July 2012 15:26
ဟိုတလောက စင်္ကပူကသူတစ်ယောက်ကတော အဲဒါမျိုးကိုတရားစွဲပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တရားမစွဲကြဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး အရေးယူလို့ ရအောင် ဆောင်ရွက်ကြရအောင်။
authority should do something if that information is deem to be true ?? but should not be benefit for police you know what i mean?
9 July 2012 22:57
Actually every supper markets or larger stores there is CCTV camera, because many of shoppers use to steal the dress in the dressing room, specially in foreign countries. Now you might had experienced with that kind of CCTV hidden camera, better you must go and see the store manager or owner and ask, if there is CCTV camera was fixed in the dressing room which you're taken video or photos by hidden camera, some one hasaresponsible for that who is surely from that store employee as security worker, check it out you can find out easily, could not from out side, he or she is employee has authority for security purpose givin by owner or manager, you can charge or sue the store owner, you can claim for your compensation, in some foreign countries the store need to pay as compensatory allowancealot of money to the victim.
10 July 2012 08:32
ိအမျိုးသမီးရဲတွေကိုအရပ်ဝတ်နဲ့ လွှတ်ထားတယ်လို့ သတင်းလွှင့်လိုက်ပါ။
10 July 2012 15:08
အဲဒါမျိုးတွေက NLD က စောက်လုပ်မရှိတဲ့ ယောင်ဝါးတွေပဲ လုပ်တာ...ရုံးချုပ်ရှေ့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကျုပ်ဘေးမှာတင် NLD တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ တကောင် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ထိုင်တုန်းရိုက်လာတာဆိုပြီးတော့ ကောင်မလေး တယောက် စကပ် အောက်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို Wifi နဲ့ နောက်တကောင်ကို Share နေတာတွေ့လို့ ဘာလုပ်တာလဲ မင်းတို့ကောင်တွေ မှာ နှမ မရှိဖူးလားဆိုပြီး ဟောက်လိုက်တော့မှ ရုံးထဲကို ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ပြန်ဝင်သွားတယ်...မကြာပါဖူး....ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီ ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ၁၀၉ ၁၁၀ ရုံးထဲက နောက်ထပ် ၃ ယောက်ထပ်ထွက်လာပြီး ညီလေးက ဘယ်ကလဲ ဘာလို့ ရုံးထဲကို ကြည့်နေတာလဲ ဆိုပြီး ပုလိပ်စစ်စစ်ပါလေရော...မြန်မာပြည်သားတယောက် မြန်မာပြည်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ ထိုင်ပြီး လက်ဖက်ရည်မသောက်လို့ ဘာသောက်ရမလဲ လို့...စိတ်ချ...အစိုးရဖက်က မဟုတ်ဖူး...ခင်ဗျားတို့ ရုံးကို ယောင်လို့တောင် ချီးလှည့်မပေါက်ဖူးလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဆိုတာ ဝေးလာဝေးလို့... နာမည်နဲ့ တကွ ပြန်ဖော်လို့ ရတယ်နော်...ကြိုက်တဲ့ NLD က သူတွေ စုံစမ်းလို့ ရတယ်...ရုံးထဲက ထွက်လာတဲ့ ၃ ကောင်နာမည်ကို ရအောင်မေးပြီးတော့ကို မှတ်ထားလိုက်တယ်..
ကောင်းတယ် အဲဒီလို အသိပေးမှလဲ နောက်ဆင်ခြင်လို့ ရတာပေါ့၊ မအေလိုး၊ နှမလိုးတွေကလဲ လူမဆန်ဘူး၊ ငါလိုးမသားတွေ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်ကိုတိုင်က ဖျက်ဆီးနေ တဲ့ငါလိုးမသားတွေကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ တွေ့သလိုသာ လုပ်လိုက်ကြပါဗျာ၊ ဒီမအေလိုးတွေကြောင့် အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ အရှက်ရကြတာ။
11 July 2012 18:59
လုပ်တဲ့ကောင်ရော ဆိုင် နာမည် ကို တင်ပေးပါဗျာ။ ခွေးသား တွေကို ရိုက်သတ်ချင်လို့ လက်ယားနေပီ။